» साना छोराहरु भन्छन्, अंकलहरु घरमा आउँदा हामीलाई बाहिर, लखट्नुहुन्थ्यो, अनि भित्र ढोका लाएर बस्नुहुन्थ्यो ! (भिडियो हेर्नुस्) साना छोराहरु भन्छन्, अंकलहरु घरमा आउँदा हामीलाई बाहिर, लखट्नुहुन्थ्यो, अनि भित्र ढोका लाएर बस्नुहुन्थ्यो ! (भिडियो हेर्नुस्) – हाम्रो खबर
साना छोराहरु भन्छन्, अंकलहरु घरमा आउँदा हामीलाई बाहिर, लखट्नुहुन्थ्यो, अनि भित्र ढोका लाएर बस्नुहुन्थ्यो ! (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । श्रीमतीका लागि दुवईको जागीर छोडे, भारतमा जागीर गर्थे श्रीमतीलाई पनि लिएर भारतमा ५ महिना राखे । अब त बानी ठिक होला भनेर घरमै राखेर भारत बसेका थिए । छोराछोरी हुर्कदै थिए त्यसैले श्रीमतीलाई नेपालमै छोडेर उनी भारतमा कमाउन थाले । श्रीमतीको चाल उस्तै भएको उनले थाहा पाए । उनले श्रीमतीलाई ८ दिन पछि आउँछु भनेर खबर गरे । तर उनी त्यो भन्दा ४ दिन अघि नै आइपुगे । अनि थाहा पाए श्रीमतीको ब्यवहार ।”
“श्रीमान आउँछु भनेको समय भन्दा पहिल्यै आएपछि दुई दिन श्रीमानसंगै बसिन्, जगबिर महतरा(अर्घाखाँची) ले आफ्नो घटना सुनाउँदै भने, म आएको दुई दिन पछि स्कूल जान्छु भनेर निस्केकी श्रीमती हराइन् । ८ वर्ष अघि प्रेम विवाह गरेको हुँ । कहिल्यै राम्रो ब्यवहार भएन,उनले दुख बिसाउँदै भने ।”
“आफु भारतमा भएको बेलामा श्रीमतीले स्कूलको क्यान्टिनमा काम गर्ने गरेको पनि आफुलाई थाहा नभएको बताए । उनी १४ महिना देखि फेरी भारतमा बस्दै आएका थिए । उहाँ उहाँ पनि दर्शै यता उनीसंग श्रीमतीको कुरा भएको थिएन ।”
“उनले श्रीमतीलाई अर्घाखाँची स्थित घरमा छोडेर गएका थिए । तर छोराछोरी पठाउन भन्दै उनी घर छोडेर बजारमा भाडा लिएर बस्न थालेकी थिइन् । सोमवार अर्घाखाँची घर जाने स्कूलमा विदा मिलाउन भन्दै आइतवार स्कूल गएकी श्रीमती उतैवाट हराएको जगबीरको भनाई छ ।”
“स्कूलमा श्रीमान विदेवाट आए पनि एक पैसा ल्याएनन् मलाई पैसा सापटी दिनु भनेर स्कूलवाट उल्टै पैसा समेत लिएर हिडेको आफुले थाहा पाएको जगबीरको भनाई छ ।” हेर्नुहोस भिडियो सामाग्री…